Justin Bieber နဲ့ Baskin Champion တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဟာ အေးစက်နေခဲ့ပြီလား…?
On June 6, 2018 June 6, 2018 By Aminnyar
အခုတလောမှာ Justin Bieber နဲ့ Baskin Champion တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ RS ဟာ အဖျားရှူးသလိုလို အေးစက်နေသလိုလို ရှိနေကြတယ်လို့ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မီဒီယာတချို့က ဆိုနေကြပါတယ်။
E! New မီဒီယာရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်ကျော်လောက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ SoulCycle Classes ရှိုးပွဲနဲ့ တခြားပွဲအနည်းငယ်ကို အတူတွဲတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက် အပြင်နေရာတွေမှာ အတူသွား အတူလာ စတာတွေကို သိပ်မလုပ်ခဲ့ကြတော့သလိုပါပဲတဲ့။ သူတို့တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိန်းတွေ့ကြပုံလည်း မရှိကြသလို ဆက်ဆံရေးကလည်း သွေးတွေအေးနေပြီး သာမန်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးပဲ ကျန်တော့သလိုပဲလို့လည်း ပြောကြပါသေးတယ်။
Justin ဟာ Champion နဲ့ အပြင်တွဲသွားရတာကို နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံတော့ ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Champion ရဲ့ ပုံစံက အေးအေးဆေးဆေးလေးကိုး။ ပြီးတော့ ခုလို သူတို့နှစ်ယောက် အေးစက်နေရတာဟာ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ရှိနေကြရလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… လို့ အဲဒီမီဒီယာကပဲ ထပ်ပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။
A post shared by baskin champion (@baskinchamp) on Nov 7, 2017 at 9:42am PST
Justin ဟာလည်း Los Angeles မြို့မှာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ရှိမနေဘဲ ခရီးတွေ ခဏခဏ ထွက်နေခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Baby သီချင်းနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သီချင်းချစ်သူတွေရဲ့ရင်ကို သိမ်းကြုံးရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Justin ကတော့ Champion ရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရင်လည်း သူ့ချစ်သူ ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှအသည်းအသန်တွေ ခဲတွေမှန်မနေဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သီးခြားမတွေ့ကြဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောပြီး ဆုံရင်ဆုံကြ၊ ဒါမှမဟုတ် ချာ့ချ်တက်ရင်း ဆုံရင်ဆုံကြနဲ့ပါပဲ။ Justin ပုံစံဟာ Champion နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သာမန်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံပုံနဲ့ ပိုတူလာသလိုပါပဲ
တချို့ပြောကြတာကလည်း Champion ဘက်က အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချိန်ဇယားတွေ ပြည့်နှက်နေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ​မော်​ဒယ်​လ်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ သူမဟာ Costa Rica ဘက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းရှိလို့ သွားသွားနေရလို့ပါပဲတဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ခုလိုဖြစ်နေရတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လထဲမှာ Justin က သူ့အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Selena Gomez နဲ့ ခဏပြန်တွဲခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆိုပြီးတော့လည်း ကောလဟာလလေးတွေ ထွက်နေသေးတာ အမှန်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ Justin ရဲ့ ရင့်ကျက်လာမှုကြောင့်လည်း ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာသလားလို့ ထင်ကြေးတွေ ပေးနေကြပြန်ပါသေးတယ်။
Justin ဟာ Selena နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြတ်စဲပြီးကတည်းက တစ်ကိုယ်တော်အဖြစ် ပိုနေချင်လာသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့လည်း သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေအသစ်တွေ လုပ်ဖို့ကိုလည်း အရမ်းအာရုံစိုက်နေခဲ့ပါတယ်
သတင်းမီဒီယာတစ်ခုကတော့ Justin ရဲ့ အပြုအမူတွေကို အဲဒီလို သုံးသပ်ခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာတလွှားက သူနဲ့ Selena Gomez တို့ကိုပဲ သဘောတူတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့…
Justin တစ်ယောက် Champion နဲ့ RS က အေးတိအေးစက်ဖြစ်နေပြီး သူက Single ပြန်ဖြစ်ချင်နေတာဟာ သူ့အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Selena ကလည်း Single ဖြစ်နေသေးလို့ပဲလား။ သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်တွဲကြဦးမှာလား
လို့များ တွေးနေကြမလားဆိုတာ မသိနိုင်တော့တာ အဟုတ်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖူးစာပါရင်တော့ သူတို့တွေဟာ ညားချင်တဲ့လူနဲ့ညားကြမှာ ငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ။
PREVIOUS POST Previous post: Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၇ နေရာရောက်ရှိနေတဲ့ Cardi B ‘I LIKE IT’
NEXT POST Next post: အကျီစားသန်လို့ လူတွေဝေဖန်တာခံနေရတဲ့ Demi Lovato